काठमाडौंमा थ्रिडी फोटो संग्रहालय सञ्चालन
सुगम संगीतका सगरमाथा
जलवायु परिवर्तन बुझ्न अंग्रेजी जान्नै पर्ने हो ?
टिप्पणी सेवा भट्टराई
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी शहर केन्द्रित र अंग्रेजी भाषाका जानकारप्रति लक्षित छ। अंग्रेजी भाषाका सामग्रीले यो विषय बुझ्न धेरै मद्दत गर्छन्, तर ती सामग्री नेपालका धेरैजसो मानिसका पहुँचमा छैन। नेपाली भाषाका सामग्रीमा स्थानीय चासोका विषय वातावरण, कृषि, वन, प्राकृतिक प्रकोप आदिबारे धेरै जानकारी पाइन्छ। तर, त्यसमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी भने कम पाइन्छ।
‘भाग्यवाद र विकास’ मा कहाँ र किन गलत छन् डोरबहादुर ?
​​​​​​​हो, ब्राह्मण अवधारणाहरूमा आधारित जातप्रथा नेपालको ठूलो सामाजिक समस्या हो तर ‘ब्राह्मणवाद’ सिर्जित ‘भाग्यवाद’ कै कारण देशको विकास हुन नसकेको हो भन्ने विष्टको विश्लेषण सही होइन।
‘एन्टी जेम्स बन्ड’
झूट र विरोधाभाषलाई लेखनको मूल विषय बनाएका जोन ल क्यारेले जीवनमा थोरै मात्रै अन्तर्वार्ता दिए । आजीवन साहित्यिक पुरस्कार लिन अस्वीकार गरे । उनी पुरस्कारबाट होइन पाठकबाट लेखकको गुणस्तर थाहा पाउनुपर्ने विचार राख्थे ।
जलवायु परिवर्तन नीतिमा कहाँ छन् महिला ? जलवायु परिवर्तनको असर महिलामा धेरै र फरक पर्छ भन्ने प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि हाम्रा नीतिले ति समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।
तिम्रो क्वाँटी कि उसको बिरौंला? कसको क्वाँटी ? कुन हो सही पाकविधि ? को हुन् त आधिकारिक विज्ञ ? भन्ने जस्ता विषयमा तर्कवितर्क गरिरहँदा हामीले हाम्रा रैथाने खानेकुरामाथि भइरहेका र हुनसक्ने पूँजीवादी अतिक्रमणप्रति पनि चिन्ता लिनुपर्ने देखिन्छ।
के यो महाप्रलयको संकेत हो ? हाम्रा विभिन्न धर्मग्रन्थले पृथ्वीको महाप्रलयको ठोकुवा गरेका छन् । के कोरोनाभाइरसको यो महामारी यस्तै प्रलयको पूर्वसंकेत वा चेतावनी हो त ? एकथरी मानिस यसको बहसमा जुटेका छन् ।
फोहोर विरुद्धको अभियानमा अल्ट्रा धावक नेपाली अल्ट्रा धावक मीरा राईले हाइकिङ रुट अन्तर्गतका केही स्थानहरुमा सरसफाइ अभियान थालेकी छिन्, उनले यसको सुरुवात चम्पादेवीबाट गरेकी छिन् ।
मुहारका कथा व्यक्तिको मुहार चित्र कोर्नुमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अभिप्राय मात्र हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । यो पूर्णतया असत्य पनि होइन । किनकि चित्रकारहरू व्यावसायिक रुपमा पनि यो काममा लागेका छन् ।
हाम्रा लोक–मिथकः जहाँ देउता पनि दण्डित हुन्छन्
अविश्वसनीय, अविस्मरणीय बडिमालिका
मानव बस्तीबाट धेरै टाढा ४,२०० मिटर उँचाइमा अवस्थित बडिमालिका मन्दिरमा पुगेकाहरु त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताबाट आल्हादित हुन्छन्।
त्यो वेला कोलकातामा नेपाली छोरी असुरक्षित मानिन्थे । धेरैले सुरक्षित हुनैका लागि मुसलमानसँग दोस्रो र तेस्रो पत्नी बनेर विवाह पनि गरेका थिए । तर, लक्खीका बुवा चन्द्रबहादुर सिंह परियार र धनमायालाई यो मञ्जुर थिएन ।
रहस्यले घेरिएको काँक्रेविहार
रिपोर्ट सेवा भट्टराई
काँक्रेविहारमा भेटिएको प्राचीन बौद्ध–भग्नावशेष पुनर्निर्माण र उत्खननले नेपालमा बौद्ध धर्मको विकास र विस्तारको नयाँ तथ्य स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नाच्ने क्रममा संगीतकै तालमा अचेत भएर घण्टौं झुम्ने र ब्युँझने घाटु नाच अन्तर्गतको सती घाटुले अचेत अवस्थामा पुर्‍याउने भएकाले जहाँसुकै देखाइँदैन।
वीरगञ्जमा ‘जोगिरा सरारारा..‍‍‍
तराई–मधेशमा होली पर्वका कतिपय परम्परा लोप भइसके पनि मौलिक गीतहरू भने अझै पनि सुन्न पाइन्छन्।
राजधानीमा कर्णालीको ‘गर्भ छिटा’
नाटक गर्भ छिटा काठमाडौंमा बसेर कर्णालीको संस्कृति र रहनसहन नियाल्ने एउटा दुर्लभ मौका हो । यो नाटक २४ फागुनदेखि काठमाडौंको मण्डला थिएटरमा नियमित प्रदर्शन भइरहेकाे छ ।
“म डुब्दैछु, आइ एम सिंकिङ । धेरै मानिस अन्तिम घडीमा यस्तो भन्न सक्दैनन्, तर म सक्छु । म आफ्नो जीवनदेखि सन्तुष्ट छु, म एक खुशी मान्छे यहाँबाट जाँदैछु ।”
कठै दैना मेरै मन बयाली खेल्दो...
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा लोकप्रिय नृत्यप्रधान गीत देउडा सीमान्तकृतसँगै विभेद खेपेका महिलाहरूको सुषुप्त आवाज अभिव्यक्त गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ।
मुनामदनको सुरुचिपूर्ण अनुवाद
परम्पराको जगमा बृहत् सिर्जना
पुस्तौंदेखि परम्परागत थाङ्का चित्र बनाउने एक परिवारले त्यसकै जगमा चित्रकलालाई बृहत् अर्थ र स्वरूप दिएको छ। कुनै बेला तिब्बती भक्तिकला भन्नाले भित्तेचित्र र थाङ्का मात्रै बुझिन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त शेर्पा परिवारले ऐतिहासिक कलाको यो विधालाई बृहत् अर्थ र स्वरूप दिएको छ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका अपराधका घटनालाई ओझेलमा पर्न नदिन र पीडितलाई न्याय दिलाउन राजधानीमा कला प्रदर्शनी गरिएको छ ।